होसियार ! प्रेमको बाहनामा राम्रा केटीले यसरी फसाउलान् है ! – Online Khabar 24
होसियार ! प्रेमको बाहनामा राम्रा केटीले यसरी फसाउलान् है !
हेर्दा आकर्षक, सुटेडबुटेड भएर हिँड्ने। व्यवस्थित बसाइ। पैसावाल देखिने। जति पनि खर्च गर्न सक्नेजस्ता।
कुराकानी गर्न खप्पिस। उनीहरू कामभन्दा पनि सम्बन्ध जोड्न र रसरमाइलो गर्न आतुर देखिन्छन्। छोटो समयमा विश्वासमा लिई आर्थि’क प्रलो’भनमा पार्न खोज्छन्।
शारी’रिक सम्ब’न्धको दबाबसमेत दिन्छन्। यस्ता गतिविधि गर्ने महिला या पुरुष प्रेमको बहानामा आर्थिक लाभ लिने अपराधमा संलग्न भेटिन थालेका छन्। यसलाई ‘हनी ट्र्या’पिङ’ भनिन्छ।
उनीहरू सम्बन्ध गाँ’सेर ग’म्भीर भएको बहाना बनाउँछन्। विश्वासको फाइदा उठाउँदै ‘भाव’नात्मक सौ’दाबाजी’ गरी योजनाब’द्ध रूपमा फसाउँ’छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुस’न्धान ब्युरोका प्रवक्ता श्यामकुमार महतो नेपालमा यस्तो अप’राध डर’लाग्दो गरी मौलाइरहेको बताउँछन्।
ओखलढुंगाको सुनकोसी–१ घर भई काठमाडौं कपन बस्दै आएकी २७ वर्षीया देवी थापा कमलपोखरीबाट पक्रा’उ परिन्।
महान’गरीय प्र’हरी परिसरका प्रवक्ता रमेश बस्नेतका अनुसार थापाविरुद्ध ओखलढुंगाका कुमार गिरीले ठगी तथा बैं’किङ कसु’रको उजुरी दिएका छन्। हनी ट्र्या’पिङमा पारी युवाहरूलाई ठ’गी गरेको आ’रोपसमेत उनीवि’रुद्ध लागेको छ। यसरी लाखौं रुपैयाँ ठ’गी गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ।
काठ’माडौं घट्टेकुलो बस्ने लालसरी शाही र कल्पना हमाल गत चैतमा प’क्राउ परे। उनीहरूविरुद्ध कोटेश्वरका एक पुरुषले उजुरी दिएका थिए। सामान्य चिनजानमा यी महिलाले ती पुरुष’लाई होटलमा भेट्न बोलाई अनेक बहानामा गो’प्य भिडियो बनाएका थिए। त्यही भि’डियोको दु’रुपयो’ग गरी उनीहरूले पटक–पटक गरेर लाखौं रुपैयाँ लिए।
पुनः ८ लाख रुपैयाँ मागेपछि पी’डितले प्र’हरीमा उजु’री दिएको महाशाखाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद कोइराला बताउँछन्। ‘अनुस’न्धानका क्रममा उनीहरूले अरूलाई पनि यसैगरी फसाएको पाइयो’, कोइराला भन्छन्।
दाङ प्रहरीले आ’पराधिक लाभ (एक्सट’र्सन) कसुरमा सीतादेवी थापा, खुमा वली, सुष्मा परियारलाई अघिल्लो महिना पक्रा’उ गरेको थियो। ती महिलाले का’नुनी परा’मर्शको बहा’नामा होटेलमा बोलाई बियर र चिया खाएकै भरमा जब’र्ज’स्ती क’रणीको आ’रोप लगाएर एक पुरुषसँग बा’र्गेनिङ गरेका थिए। ५० लाखबाट बार्गे’निङ गरेर १८ लाख रुपैयाँ लिएका थिए।
सीतादेवी बस्दै आएको डे’राबाट ७ असारमा पी’डि’तलाई ध’म्की’ दिई लिएको १७ लाख रुपैयाँको चेक एक थान प्रह’रीले ब’रामद गरेको थियो। नगद एक लाख रुपैयाँ ब्याजमा लगाइसकेको प्रारम्भिक अनुस’न्धानबाट खुलेको प्र’हरीले बताएको छ। प्रह’रीले पी’डकको साथबाट चेक र तमसुक पनि बरा’मद गरेको थियो।
यूएई दुबईबाट फर्किएका सिन्धुलीका सुरज नेपालम रोजगारीको खोजीमा थिए। तर, के गर्ने उपाय थिएन। यसै क्रममा उनलाई विदेशबाट एउटा इमेल आयो। इमेलमा विदेशी यु’वतीले केही आर्थिक सहयोग मागेकी थिइन्। दुईबीच सम्पर्क बढ्दै गयो। विवाह गर्नेसम्मको योजना बन्यो। पछि थाहा भयो– विदेशी युवतीको नाममा इमेल आईडी बनाएर ठ’गी गर्ने रमेश खड्का रहेछन्। उनले विभिन्न प्र’लोभनमा सुरजबाट ७ लाख रुपैयाँ लिइसकेका थिए।
युवतीहरूका नाममा सामाजिक सञ्जालमा अका’उन्ट बनाई अनलाइनबाट ठ’गी गर्ने दोलखाका रमेश खड्का, नवलपरासी रामग्रामका विसेश्वरप्रसाद तिवारी र सन्दीप कलवारलाई प्रहरीले नियन्त्र’णमा लिएर अनुस’न्धान गरिरहेको छ। उनीहरूको बैंक खाताबाट १५ करोड रूपैयाँबराबरको कारोबार भइसकेको खुलेको छ। प्रहरी निय’न्त्रणमा रहेका तीनै जनाले लो’भमा प’रेर काम गरेको बयान दिएका छन्।
यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। मायाप्रेमको बहानामा यस्ता आर्थिक अपरा’ध बढिरहेको ब्युरोका प्रवक्ता म’हतो बताउँछन्। ‘पछिल्लो समय हनी ट्र्या’पिङमा संग्लन हुनेको संख्या बढ्दो छ’, उनी भन्छन्, ‘विभिन्न बहानामा सम्बन्ध गाँ’स्ने, गो’प्य भिडियो तथा फोटो खिच्ने गर्छन्। सहमतिमा खिचेको त्यही भिडियो तथा फोटोलाई देखाएर पैसाको बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै छ।’ annapurnapost. com बाट साभार गरियको खबर ।
Prevसुपरस्टार पुनित राजकुमारको मृ’त्युको शो’कमा ३ जना फ्यानको मृ’त्यु !
next५० जना एयरहोस्टेसले बीच सडकमा आएर धमाधम कपडा खोल्न थाले ! कारण यस्तो छक्क् पार्ने